အာဖာဖာ (သို့မဟုတ်​) အစာများ၏ဘုရင်
မိတ်​​ဆွေတဦးက ​ဈေးကွက်​ထဲမှာ တ​နေ့တခြား ​ခေတ်​စား​နေ​သော အာဖာဖာ အပင်​အ​ကြောင်း​မေးလာပါတယ်​၊ အာဖာဖာ ဆိုတာက ဘာပင်​လည်း? အများ​ပြောသလို မြက်​ပင်​တမျိုးလား? စသည်​ဖြင့်​​မေးလာပါတယ်​၊ အာဖာဖာဆိုတာ မြက်​ပင်​ မဟုတ်​ပါ၊ ပဲပင်​တမျိုးသာဖြစ်​ပါတယ်​၊ ဟိုး ယခင်​ကတည်းက အာရပ်​ လူမျိုး​တွေက ဒီအပင်​ကို မြင်း​တွေကို ​ကျွေးခဲ့ကြတယ်​၊ ဒီအရွက်​ကို စားရ​သော မြင်း​တွေဟာ သန်​မာတယ်​ ၊ ​ပြေးရင်​ အရှိန်​မြန်​တယ်​ ၊ အားသာလွန်​တယ်​​ပေါ့၊ ဒါ့​ကြောင့်​ အရွက်​တကာအရွက်​ထဲမှာ အဟာရဓာတ်​အများဆုံးပါတာမို့ အယ်ဖာဖာကို ”AL-FAS-FAH-SHA” 'အလ်-ဖက်စ်-ဖဂ်-ရှ'သို့မဟုတ်) Father of food အစာများ၏ဘုရင် ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်​။
အသားဓာတ်​ဆိုတာကို English လို ​ ပရိုတင်း Protein လို့​ခေါ်တယ်​၊ ဒီပရိုတင်းရဖို့ အမိုင်​နိုအက်​ဆစ်​ Amino acids ဆို​သောအရာများနဲ့ ဖွဲ့စည်းကြရတယ်​၊ လူတ​ယောက်​ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​ ဖွံ့ဖြိုးလာ​စေဖို့ ပရိုတင်း ​ခေါ် အသားဓာတ်​က မရှိမဖြစ်​လိုအပ်တယ်၊​​၊ ကျ​နော်​တို့ ​နေ့စဉ်​စားသုံး​နေတဲ့ ကြက်​သား ဝက်​သား ငါး ကြက်​ဥ ဘဲဥ နို့ အမျိုးမျိုး စ​သော သတ္တဝါ ​တွေရဲ့ အသားများ မှာ amino acids အမိုင်​နို အက်​စစ်​ ​တွေပါတယ်​ဆိုတာ ရှင်းပြစရာမလို​အောင်​ လူတိုင်းသိကြတယ်​၊ အသားစားမှ အသားဖြစ်​တယ်​ ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်​​လေ၊ ဒါဆိုရင်​...သားသတ်​လွတ်​စားတဲ့သူ​တွေကြ​ရော အသားဓာတ်​ ဘယ်​ကရမလည်း?၊ ဒါလည်းမခက်​ပါဘူး၊ ​နေ့စဉ်​စားသုံး​နေ​သော ပဲ အမျိုးမျိုးမှာ ပရိုတင်းဓာတ်​ ​ခေါ် အသားဓာတ်​​တွေပါတယ်​၊ ပဲစားတာကလည်း အသား စားသလို အကျိုးရှိလှတယ်​၊ ဒီ အသားဓာတ်​​တွေက ပဲ​စေ့​တွေမှာဘဲ အများဆုံးပါကြတယ်​၊အရွက်​လို​နေရာမျိုးမှာ ပါ​တော့ပါတယ်​ ပါဝင်​မှု ရာခိုင်​နှုန်း အ​တော်​ကို နည်း လှတယ်​၊
ဒါ​ပေမည့်​ ထူးဆန်းတာ တခုကို ​ပြောပြခြင်​တယ်​၊ အာဖာဖာ ပဲရွက်​ထဲမှာ ပရိုတင်းဓာတ်​ ၂၅ ရာခိုင်​နှုန်း ​တောင်​ပါတယ်​၊ ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ ရှိသမျှ အရွက်​​တွေထဲမှာ သူက protein ပါဝင်​မှုအများဆုံးဘဲ၊ဒါ့​ကြောင့်​ အာရပ်​​တွေက အစာများ၏ ဘုရင်​လို့ ​ခေါ်တာဖြစ်​မယ်​၊ ​ဆေးဝါး​ဖော်​စပ်​ဖို့ဘဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ အဟာရအတွက်​ စားသုံးတာဘဲဖစ်​ဖြစ်​ အရွက်​ကိုသာ အဓိက အသုံးပြုကြတယ်​၊ ​ရှေး​ဟောင်းအာရပ်​​တွေက အရွက်ခြောက်များကိုလည်း ရေနွေးကြမ်းအဖြစ်သောက်သုံးခဲ့ကြတယ်​လို့လည်းသိရတယ်​။
အာဖာဖာ Alfalfa ဆိုတာကို လူစင်း lucerne လို့လည်း​ခေါ်တယ်​၊ ဒီအပင်​​လေးရဲ့ ရုက္ခ အမည်​က မယ်​ဒီကာဂို စတိုက်​ဘာ Medicago sativa လို့​ခေါ်တယ်​၊ ပဲမျိုးရင်း Fabaceae ဖက်​​ဘေးစီး ထဲကဖြစ်​တယ်​၊ တခြားပဲ​တွေလို တနှစ်​ခံပင်​ Annuals မဟုတ်​ဖူး နှစ်​ရှည်​ခံ perennials အပင်​ငယ်​တပင်​သာဖြစ်​တယ်​၊ အာဖာဖာ အပင်​က အကြီးကြီးမဟုတ်​ဖူး၊ သာမန်​​တွေ့​နေကြ ၁ ​ပေသာသာက​နေ ၃ ​ပေနီးပါးမြင့်​​သော ပင်​ငယ်​​လေးသာဖြစ်​တယ်​၊ အခုအခါမှာ​တော့ ဒီအပင်​ကို ကမ္ဘာ့နိုင်​ငံ အသီးသီးမှာ important forage crop အဖြစ်​စိုက်​ပျိုး​နေပါပြီ၊ ဒီပဲပင်​ကို ကျွဲနွားစာမြက်​ အဖြစ်​၄င်း စာကျက်​​မြေ၊ မြက်​​ခြောက်​​သော်​၄င်း၊ ​ဆောင်းအခါ​ တိရစ္ဆာန်​​ကျွေးရန်​ သို​လှောင်​ထား​သောမြက်​စိမ်းအဖြစ်​​သော်​၄င်း သစ်​ရွက်​စိမ်း​မြေသြဇာ၊ grazing, hay, silage, green manure; cover crop အဖြစ်​အများဆုံးသုံးကြတယ်​။ alfalfa အာဖာဖာ ဆို​သော အမည်​ကို သုံးခဲ့တာက North America က ဖြစ်​တယ်​ ၊ ဒါ​ပေမည့်​ အင်္ဂလန်​နိုင်​ငံေ​တာင်​အ​မေရိက သြစ​တေးလျ နဲ့ နယူးဇီလန်​ စသည့်​ နိုင်​ငံတွေ က​တော့ လူစင်း lucerne ဆိုတဲ့အမည်​ကိုဘဲတွင်​ကျယ်​စွာသုံးကြတယ်​၊ အ​ပေါ်ယံကြည့်​မယ်​ဆိုရင်​ ဒီအပင်​​လေးက ၃ ရွက်​ဆိုင်​ ပဲရိုင်းပင်​ clover နဲ့ အ​တော်​​လေးတူတယ်​၊ ပဲပင်​​တွေမှာ ၃ ရွက်​မွှာ ရွက်​​ပေါင်း tri folio -late pinnate compound ပါတယ်​၊ အာဖာဖာ ပဲပင်​​လေး ငယ်​စဉ်​က ရွက်​မွှာ leaf lets ​လေး​တွေက ခတ်​ဝိုင်းဝိုင်း ပုံစံရှိကြတယ်​၊ နဲနဲ​လေး အရွယ်​​ရောက်​လာ​တော့ အဲဒီ ရွက်​မွှာ​လေး​တွေက ရှည်​လာတယ်​၊ ပဲပန်း​လေး​တွေက အစုလိုက်​ထွက်​ကြပြီး ပုံထဲက အတိုင်း ပန်းခရမ်း​ရောင်​ purple colour ရှိကြတယ်​၊
ပဲပန်း​တွေမှာပါ​သော ပွင့်​ချပ်​ ၃ မျိုး standard wings and keels ​တွေက လိပ်​ပြာပုံစံရှိ​နေကြတယ်​၊ ပဲသီး​တောင့်​ တခုမှာ အ​စေ့ ၂၀ ​လောက်​အထိပါတယ်​၊ Alfalfa အာဖာဖာ အပင်​​လေး​တွေက warmer temperate climates ရာသီဥတုရှိ​သော ​ဒေသ​တွေက သူတို့ရဲ့မူရင်း​ဒေသ​တွေဖြစ်​တယ်​၊ ဟိုး ယခင်​ ​ရှေး​ခေတ်​ ဂရိ ​ရောမ လူမျိုး​တွေက ကျွဲနွားအစာအဖြစ်​စိုက်​ခဲ့​ကြောင်း အ​ထောက်​အထား​တွေအရသိရတယ်​၊ အာဖာဖာ ပဲ​စေ့အပင်​​ပေါက်​​လေး​တွေက South Indian cuisine အစားအစာ​တွေမှာ ထင်​ရှား​သော ပါဝင်​ပစ္စည်းဖြစ်​ခဲ့တယ်​။
အိန္ဒိယ၏ ​ရှေး ​ဟောင်း အာယု​ဗေဒ ​ဆေးကျမ်း​တွေထဲမှာ​တော့ အာဖာဖာ အ​စေ့ နဲ့ အ​စေ့အ​ညှောင့်​​ပေါက်​ ​တွေဟာ ​သွေးဆဲလ်​များထုတ်​လုပ်​ခြင်း ပို​ကောင်းလာ​စေနိုင်​သလို အသားဓာတ်​နဲ့ သတ္ထု ဓာတ်​များ၏ အ​ကောင်းဆုံး အရင်းအမြစ်​ပင်​လို့ဆိုထားပြန်​ပါတယ်​၊ ၁၆ ရာစု​လောက်​မှာ စပိန်​လူမျိုး​တွေဟာ အာဖာဖာ ​တွေကို အ​မေရိကား ဆီကိုသယ်​​ဆောင်​ခဲ့တယ်​ ၊ တိရစ္ဆာန်​ အစာအတွက်​သယ်​ခဲ့တာပါ၊ ​နောက်​ပိုင်းသတိထားမိလာတာက အာဖာဖာဟာ မြက်​ထက်​ပိုပြီး​ကောင်းတယ်​ စွမ်းအင်​ပိုရတယ်​ ဆိုတာပါဘဲ၊ အထူးသဖြင့်​ မြင်းစာအတွက်​ အ​ကောင်းဆုံးဖြစ်​တယ်​၊
Alfalfa အပင်​​တွေက perennial forage legume ဆိုတာ​တင်​ပြခဲပီးဘီ၊ ပုံမှန်​အားဖြင့်​ သူ့သက်​တန်းက ​လေးနှစ်​က​နေ ၈ နှစ်​အထရှိတယ်​၊ မျိုးပြားနဲ့ ရာသီဥတုအ​ခြေအ​နေအရ တခါတရံ အနှစ်​ ၂၀ အထိ အသက်​ရှည်​ပါသတဲ့ ၊ အပင်အမြင့်ကလည်း ​​​1 m (3.3 ft) ​လောက်​အထိသာရှိတယ်​၊ ဒါ​ပေမည့်​ အပင်​ထက်​ အမြစ်​ကပိုရှည်​တယ်​။ ဘယ်​​လောက်​အထိလည်းဆိုရင်​ more than 15 m (49 ft) အထိ​တောင်​ရှိတယ်​၊ ​မြေကြီးထဲကို နက်​ရှိူင်း စွာတိုးဝင်​တာ​ကြောင့်​ ​မြေကြီးထဲမှာ နိုက်​တြိုဂျင်​ ပါဝင်​မှု ပို​ကောင်းလာ​စေတယ်​၊ ​အမြစ်​​တွေအများကြီးရှိလို့လည်း ​မြေဆီတိုက်​စားခြင်း soil erosion ကိုလည်းကာကွယ်​ပြီးသားဖြစ်​တယ်​၊ ​သွေ့​ခြောက်​တာ ​ရေနဲပါးတာ စတဲ့ ဒါဏ်​ကိုလည်းပိုမို ခံနိုင်​ရည်​ရှိတယ်​၊ တခြား​သောပဲပင်​​တွေလိုဘဲ အာဖာဖာ အမြစ်​​လေး​တွေမှာ အမြစ်​ဖု လို့ ​ခေါ်တဲ့ root nodules ​လေး​တွေမှာ ဘက်​တီးယီးယား ​လေး​တွေ ခို​အောင်း​နေကြတယ်​၊ သူတို့က သာမန်​ ဘက်​တီယီးယား ​တွေမဟုတ်​ဖူး ​လေထဲက နိုက်​တြိုဂျင်​ကို အလွတ်​သ​ဘော ဖမ်းယူနိုင်​​သော Nitrogen fixing bacteria ​လေး​တွေဖြစ်​ကြတယ်​၊ အဲဒီဘက်​တီးရီးယားက​တော့ Sinorhizobium meliloti.ဖြစ်​ပါတယ်​၊ ဒီအချက်​​ကြောင့်​လည်း ပဲပင်​​တွေက ပရိုတင်း ကို ထုတ်​​ပေးနိုင်​တာပါ၊ အမိုနိုအက်​စစ်​မှာ Nitrogen ပါဝင်​မှုက မရှိမဖြစ်​လိုအပ်​လှတယ်​၊
​ဆေးဖက်​ဝင်​တာက အရွက်​သာဖြစ်​တယ်​၊ ကျန်​​သော အင်္ဂါ​တွေကို သိပ်​သုံး​လေ့ မရှိကြဖူး။ ယခင်​က အ​စေ့ကိုလည်း ​ဆေးအ​နေနဲ့သုံးခဲ့ကြတယ်​၊ ဒါ​ပေမည့်​ အ​စေ့ထဲမှာ Canavanine ဆိုတဲ့ဒြပ်​​ပေါင်းဖြစ်​သည့်​ non essential amino acid တခုပါဝငိ​နေတယ်​၊ ဒါ့​ကြောင့်​​နောက်​ပိုင်းမှာ အသုံးမပြုကြ​တော့ဖူး၊ ဒါ့အပြင်​ အ​စေ့ထဲမှာ cyanogenenic glycoside လည်းပါတယ်​၊ ပညာရှင်​များ၏ ကန့်​သပ်​ချက်​​ကြောင့်​ အသုံးမပြုကြ​တော့ဖူး၊ အာဖာဖာ အပင်​​လေးဟာ စိုက်​ပြီး ၃လ ​ကျော်​တာနဲ့ အရွက်​ကို ခူးလိုရတယ်​၊ ဒီအတိုင်းလည်းအရွက်​ကို အစိမ်းလိုက်​ခူးစားလို့ရတယ်​။ အစိမ်းဘဲ စားစား ​ကျော်​စားစား အ​ခြောက်​အမှုန့်​လုပ်​ပြီးလည်း capsule ​ဆေး​တောင့်​လို လုပ်​စားစား စားသုံးလို့ရပါတယ်​။ အရွက်​ထဲမှာ အစိမ်း​ရောင်​ ခြယ်​​ဆေး ကလိုရိုဖီးလ်​ ​အေ chlorophyllaပါဝင်​တယ်​၊ ကလိုရိုဖီလ်​ပါ​သော အစိမ်း​ရောင်​ အရွက်​​တွေစားရင်​ ​သွေးအား​ကောင်း​စေတယ်​၊ ကျန်းမာ​ရေး နဲ့ညီညွတ်​တယ်​၊ အရွက်​ထဲမှာ ကာဗိုဟိုက်​ဒြိတ်​​တွေလည်းပါတယ်​၊ glucose သကြားဓာတ်​ကို အ​ဃြေံ​သော ကာဗိုဟိုက်​ဒြိတ်​ကို စားခြင်းဖြင့်​ အားအင်​ energy ကိုရ​စေပါတယ်​။ ဗီတာမင်​ C, A,D,E, K B1.B6, B12.လည်းအရွက်​မှာ ပါတယ်​၊ ဗီတာမင်​အစုံပါ​သောအရွက်​ဖြစ်​တယ်​၊ သတ္ထု ဓာတ်​အ​နေဖြင့်​ ကယ်​လစီယံ ပိုတက်​စီယံ အိုင်းယွန်း ​ဖောစပရပ်​ များပါဝင်​​သော အရွက်​တရွက်​ဖြစ်​တယ်​။ ခါးသက်​​စေ​သော တာပင်းနွိုက်​ ဒြပ်​​ပေါင်းလည်းအရွက်​ထဲမှာပါတယ်​၊ ဒီဒြပ်​​ပေါင်း ​သွေးထဲက ကိုလက်​စထ​ရောကို ကျ​စေတယ်​၊ ဖ​လေဘိုနွိုက်​ နဲ့ စတီရွိုက်​ များလည်းပါဝင်​ကြတယ်​၊ အဟာရဓာတ်​စုံလင်​စွာ ပါ​သော အရွက်​တခုပါ၊
အရွက်​ကို​နေ့စဉ်​စားရင်​ ခန္ဓာကိုယ်​ ကြီးထွား​စေနိုင်​တယ်​၊ ဒါ့​ကြောင့်​ က​လေးငယ်​​တွေ နလံထ လူမမာ​တွေစားသင့်​တယ်​၊ အားကစားသမား​တွေ လူကြီး​တွေလည်းမီဝဲသင့်​တယ်​၊ ဝမ်းချုပ်​တတ်​သူ၊ ​သွေးထဲမှာ အဆီဓာတ်​များသူ​တွေ၊ အဝလွန်​သူ​တွေ၊ နှလုံး​သွေး​ကြောကျဉ်းသူ​တွေစားသင့်​လှတယ်​ ၊ ဆီးချို ​သွေးချို ​ဝေဒနာသည်​​တွေလည်း ဒီအရွက်​ကို စားနိုင်​တယ်​၊ အမျိုးသမီး​တွေရဲ့ ​ဟော်​မုန်း​တွေ ဖြည့်​​ပေးတယ်​၊ အသားအရည်​ကို စို​ပြေလှပ​စေတယ်​၊ အရွယ်​တင်​နုပျို​စေတယ်​၊ အရိုး​တွေကို ခိုင်​မာ​စေတယ်​၊ ကင်​ဆာ​ဝေဒနာက​နေ ကာကွယ်​နိုင်​သလို ဆီးကျိတ်​ကင်​ဆာကို ကြိုတင်​ကာကွယ်​နိုင်​တယ်​။ အဓိကစားသုံးသင့်​တဲ့လူ​တွေက က​လေးငယ်​များ၊ လူမမာများ ၊ ဝ​သောသူများ၊ ​သွေးတိုးသမားများ၊ ​သွေးဆုံး​သော အမျိုးသမီးများ၊ အရိုးပွ​ရောဂါသည်​ မကြာခဏဖျားတတ်​သူများဖြစ်​ကြတယ်​၊ ကိုယ်​ခံစွမ်းအား ပိုမို​ကောင်းလာ​စေပါတယ်​၊
အာဖာဖာ အပင်​​တွေက အာရပ်​နိုင်​ငံ ​တွေမှာရှိ​သော်​လည်း ယခုအခါ မ​လေးရှား ထိုင်း ဖိလစ်​ပိုင်​ ဗီယက်​နန်​ နိုင်​ငံ​တွေမှာ စိုက်​ပျိုး ​နေပြီဖြစ်​ပါတယ်​ ၊ မြန်​မာပြည်​မှာ ပြင်​ဦးလွင်​ရှိ Fame Organic Farm မှာ စမ်းသပ်​စိုက်​ပျိုးတာ ​အောင်​မြင်​​နေတယ်​ဆိုတာကြားသိရပါတယ်​၊ တကယ်​လို့ စိုက်​ပျိုးမယ်​ဆိုရင်​လည်း မြန်​မာပြည်​မှာ ​နေရာ​ဒေသမ​ရွေး ​အောင်​မြင်​ဖြစ်​ထွန်းနိုင်​​လောက်​သည်​ဟုထင်​မိပါတယ်​၊ ထူးခြားချက်​တခုက ဒီအပင်​စိုက်​ရင်​ ​မြေသြဇာ လုံးဝ သုံးစရာမလိုတာပါဘဲ...
Labels: Agriculture Techniques, စိုက်​ပျိုး​ရေးနည်းပညာ, တိုင်းရင်းဆေး